Anjali G - Mag tsy mampino
Handeha samirery ve ianao? Tena mora ve ny manangona ny entana rehetra ary mampiditra irery? Raha eny ny valinteninao dia azo antoka fa tsy fantatrao ny ezaka sy ny asa takiana amin'ny famindrana toerana. Raha izay no tianao…
Ny filàna marina an'ireo mpanamboatra entana sy mpamindra ao Delhi
Janoary 23, 2017
Ny antony ilana ireo mpitsikilo matihanina Mety hisy hieritreritra fa ny fikarakarana famindran-toerana dia tsy mila zavatra hafa ankoatry ny fiantsoana havana aman-tsakaiza vitsivitsy, fanofana kamio na mindrana fiara fitateram-bahoaka, fampivondronana ny zavatra ary vao hiainga. Mety niasa izany…
Jereo ny toerana itodiana amin'ny fitsangatsanganana Golden Triangle
Janoary 18, 2017
India, ilay firenena tsara tarehy sy mahavariana feno fahagagana, ary ny firaisan-kina amin'ny fahasamihafana dia manolotra anao ny tena sarin'ity firenena tsara tarehy ity. Manana zavatra ho an'ny rehetra ny firenena. Na izany aza, ny mpizahatany rehetra mitsidika an'i India ary manana fotoana fohy,…
Delhi dia toerana feno fientanam-po, fientanam-po, fientanam-po ary fahafinaretana. Raha tsy mbola niainanao ny iray tamin'ireo zavatra ireo tany Delhi, indrisy, tsy mbola niaina ny tena fotom-bolan'ny renivohitra ianao. Manana zavatra betsaka ho anao i Capital mba hahafahanao mameno ny fanirianao mitsangantsangana toy ny mahafinaritra…
Hacks fitsangatsanganana 10 hanamorana ny dianao iraisam-pirenena
Septambra 1, 2016
Ny fitsangatsanganana any an-tany hafa dia olana ihany koa ho an'ireo mpandeha voalohany ary koa ho an'ireo izay mandeha matetika amin'ny dia iraisam-pirenena. Mahavelombelona ny fitsidihana firenena hafahafa, saingy rehefa miomana tsara ianao. Raha mifantina fotsiny ny…
Toeram-pisakafoanana fizahan-tany 8 lehibe any Mount Abu
Aogositra 26, 2016
Mount Abu dia tobin'ny havoana mahaliana any amin'ny tany efitra any Rajasthan. Any amin'ny distrikan'i Sirohi no misy azy ary iray amin'ireo toerana tantaram-pitiavana ambony indrindra any India. Any amin'ny haavo 1220 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina no misy azy ary…
Avaratra Atsinanana, Ilay Lanitra tsy voadinika tany India
Aogositra 23, 2016
Tamin'ny fotoana nanombohan'ny fikorontanan'ny hafanana nandrevo anay, dia nitady fialan-tsasatra tokoa izahay. Amin'ny toe-javatra toy izany, angamba ny olona tsy manambady toa ahy dia tsy misaintsaina firy momba ny faritra, ny toetrandro, ny fivelomana ary ny fitaovana mavesatra be.…
Zavatra mahafinaritra mahaliana any Dubai
Aogositra 8, 2016
Mandoa fitsangatsanganana any Dubai, miavaka eo amin'ny toerana be mpitady indrindra eto ambonin'ny planeta ary miaina ny zavatra mahafinaritra rehetra entin'ny tanàna eo ambony latabatra. Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny zavatra mahafinaritra sy mahafinaritra indrindra azonao atao mandritra…
Top 10 Mahasarika Mahagaga Ao Thekaddy sy ny manodidina azy
Kerala no toerana nofinofisin'ny olona tia natiora. Na dia manolotra fotoana volamena aza ny rano any ambadiky ny kristaly mandany fotoana tsara miaraka amin'ireo olon-tianao, ny fofon'ny zava-manitra amin'ny rivotra dia mamelombelona ny fanahinao. Fitsaboana maitso mavana ny manodidina…
Tempoly be voninahitra indrindra any Bangalore izay tsy tokony halainao
Bangalore dia manan-karena amin'ny kolotsaina ara-pinoana sy an'izao tontolo izao, izay hita amin'ny toerana ara-pinoana isan-karazany, amin'ny toerana mamorona asa tanana Kannada, fiaraha-monina ary fomba amam-panao. Anisan'ny andriamanitra andriamanibavy be mpivavaka indrindra ao India koa i Bangalore. Tsy izany ihany…
Lamaody sy fomba fiaina11
Teknolojia & angovo76